၁၈ နှစ် မပြည့်သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းအတိုင်း လက်ထပ်နိုင်သည့် ဥပဒေပုဒ်မကို လွှတ်တေ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ၁၈ နှစ်မပြည့်သော်လည်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေများတွင် သတ်မှတ်ထား သည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ ယင်းမှာ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းအား ပြင်ဆင်သည့်အချက် ၁၂၉ ချက်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီမှ တင်သွင်းခဲ့ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး လွှတ်တော်မှ သဘောတူအတည်ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
”အခုဥပဒေဟာဆိုရင် ကလေးသူငယ် ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ ၃(ခ)မှာ ကလေး သူငယ်ဆိုသည်မှာ အသက်မပြည့်သေးသော သူကိုဆိုသည်ဆိုပြီးတော့ အတည်ပြုပြီးဖြစ် ပါတယ်။ ကလေးသူငယ်ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက် အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသော ကလေး သူငယ်များအတွက်သာလျှင် စဉ်းစားရန်ဖြစ် ပါတယ်။ တည်ဆဲဥပဒေများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း များလို့ ဆိုတဲ့အခါမှာ ဥပမာအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာ သာဓလေ့ထုံးတမ်းမှာဆိုရင် ပုဆိုးတန်းတင်ရုံ ဖြင့် အကြင်လင်မယားဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ပြီးတော့ အရှေ့ခုနစ်အိမ်၊ အနောက်ခုနစ်အိမ် အသိပေးရုံဖြင့် အကြင်လင်မယားဆိုတဲ့ဓလေ့ ရှိပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လဲ အသက် ၁၃ နှစ်ပြည့်ရုံဖြင့် စေ့စပ်မင်္ဂလာပွဲတွေ ပြုလုပ် လို့ရပါတယ်။ တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ ပြောမယ်ဆိုရင်လဲ နိုင်ငံရင်းသားခရစ် ယာန်များ ထိမ်းမြားခြင်းဥပဒေမှာဆိုရင်လည်း ထိမ်းမြားလိုသူ ယောက်ျားလေး၏ အသက် သည် ၁၆ နှစ်ဖြစ်ရမည်။ ထိမ်းမြားလိုသူ မိန်း ကလေး၏အသက်သည် ၁၅ နှစ်ဖြစ်ရမည် ဆိုပြီးတော့ တည်ဆဲဥပဒေမှာလည်း ရှိပြီးဖြစ် ပါတယ်။ တည်ဆဲဥပဒေတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေတွေ ရှိပါလျက်နဲ့ အသက် ၁၈နှစ်ပြည့် မှ ပဋိညာဉ်ပြုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်က ဥပဒေ တွေနဲ့အညီ ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲလျက်ရှိနေပါတယ်” ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်စိုးလင်းက ဆိုသည်။
သို့သော် ယင်းကဲ့သို့လက်ထပ်ထိမ်းမြား ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၈ နှစ်အောက်ကလေး များသည် ပညာရေးအရ၊ လူမှုရေးအရ၊ စီးပွား ရေးအရ မည်ကဲ့သို့မျှ ပြည့်စုံနိုင်သည့်အခြေ အနေမဟုတ်ကြောင်း၊ အဆိုပါကလေးများ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ရရှိလာသည့်မျိုးဆက်သည် ပိုပြီးကောင်းမွန်သွားရန် အလားအလာ အင် မတန်မှ နည်းပါးကြောင်းကို အဆိုတင်သွင်း ခဲ့သည်။ သို့သော် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေး နှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက ”အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ထိမ်း မြားနိုင်သည့်အသက်သည် ¤င်းတို့၏ တည်ဆဲ ဥပဒေနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေများတွင် သတ် မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်စေရမည်ဟု တစ် ပိုဒ်တည်းဆိုလျှင် ပြည်သူတွေ ဖတ်ရှုရမှာလဲ ရှင်းလင်းလွယ်ကူပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်လဲရှိပါ တယ်။ လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေနဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေတွေကလဲ ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝန် ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်း၊ အကြံပြုချက်အ တိုင်း ခွင့်ပြုပါတယ်”ဟု လွှတ်တော်တွင် ပြော ကြားခဲ့သည်။
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေဝန်ကြီးဌာနက တင်သွင်းသည့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေ ကြမ်းကို ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၆ ရက်မြောက်နေ့ တွင် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက အစီရင်ခံစာ ဖတ်ကြားရှင်းလင်းခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပြင်ချက် အဆို တင်သွင်းဆွေးနွေးနိုင်ရန် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လေးဦးက အမည်စာရင်းတင် သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့တင်သွင်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနှင့်အတူ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ချက်အဆိုတင်သွင်းသူ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေ ရေးရာကော်မတီ၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်တို့ အပါအဝင် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များက စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် တွင် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆန်များကို ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အင်ဒိုနီးရှား ဈေးကွက်များသို့ မကြာမီ တင်ပို့??